Madal - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Mashaariic badan oo aan u soo saarnay macaamiisheena, waxaan la soo shaqeeyay shaqsiyaad cajiib ah; kuwaas oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada - fannaaniinta, maareeyayaasha mashruuca, daaweeyayaasha, fannaaniinta hiwaayadda iyo sawir qaadayaasha. Mashaariicdani waxay noqdeen kuwo si buuxda uga qaybqaata macaamiisheena ama il weyn oo dakhli dadban ah. Waxaan la shaqeeynaa shaqsiyaad si aan uga caawino inay ka dhisaan alaabtooda meel xoqan, codsi NewGenAppsAwoodda ganacsi iyo farsamada.
Kuma culeysno samaynta macaamiisha. Halkii, waxaan ku adkeyneynaa kasbashada Wada -hawlgalayaasha. Waxaan la shaqeynay bilowyo badan dhisida MVPs, kuwaas oo qaarkood ay sii socdeen si ay u helaan maalgelin aad u weyn. Waxaan fahamsanahay baahiyaha iyo caqabadaha bilowga waxaan si dhow ula shaqeynaa sidii shuraako ahaan si aan u qeexno istiraatiijiyadooda wax soo saarka guud. Waxaan bixinnaa maareyn badeecadeed oo socota - kooxdayada ayaa si dhakhso leh oo hufan u gaarsiin karta natiijooyinka bilowga app
Waxaan kaa caawineynaa samaynta daruurahaaga iyo istaraatiijiyada socodka, naqshadaynta xalalka iyo gaarsiinta barnaamijyada baahida ganacsigaaga. Waxaan fahamsanahay in amniga, tayada iyo wax -qabadku ay yihiin kuwa ugu muhiimsan marka laga hadlayo horumarinta barnaamijyada shirkadda. Waxaan horumarinnaa xalal ganacsi oo la habeeyay oo ku saleysan macaamiisheena 'iyo shuruudaha warshadaha.